Water Water dị ka naanị onye nnọchi anya Kama Na Poland ọ na-enye karama mmiri na isi iyi mmiri mmiri ọ drinkingụ andụ na mmiri iyi ọ drinkingụ drinkingụ, maka ụlọ akwụkwọ na mahadum, ụlọ ọfịs, ebe a na-ere ihe, osisi na-emepụta ihe, ebe a na-ahụ maka egwuregwu, ebe egwuregwu, ọdụ ụgbọ elu, ọdụ ụgbọ mmiri, ebe a na-ahụ maka ahụ ike, ụlọ ezumike, ebe nkiri, sinima, ụlọ ọrụ steeti, ogige, egwuregwu, ebe egwuregwu, ebe a na-egwu egwu, wdg.
Ebumnuche a drinkingụ ihe-ọ drinkingụ --ụ - ihe ngosi LZS8WSS2K
Green aghụghọ - Egosiputa nọmba nke karama plastic echekwara.
Ihe nlele eserese (ụdị na-eji naanị nzacha) - Green, odo na acha ọbara ọbara LEDs na-egosi ọnọdụ nke nzacha ahụ.
Mmiri iyi Laminar - Recessed jupụta nozulu - ana achi achi erite eruba na obere spatter
Mgbanwe spout - Flexi-Nche na-echebe megide mmerụ onye ọrụ. O nwere mkpuchi nke na-echebe mbido uto nke microorganisms.
Kọmputa ihe mmetụta uche - Achọghị ịrụ ọrụ na ịdị ọcha na arụmọrụ na akpaghị aka na-agbanyụ mgbe 20 sekọnd arụ ọrụ.
Mgbe ejiri ya na ụlọ ọrụ ụlọ akwụkwọ, enwere ike inwe ya pụrụ iche, arụmọrụ dị mfe, na-agbanwe mgbanwe Easy-Flex nke na-echebe ụmụaka pụọ ​​na mmerụ ahụ. Onye na-ewepụta ihe maka iko mmiri na-ejuputa n’ọkụ na-eme ya.
Ihe ọ Drinkụ Drinkụ - EZS8S nlereanya
Mgbe ejiri ya na ụlọ ọrụ ụlọ akwụkwọ, enwere ike inwe ya pụrụ iche, arụmọrụ dị mfe, na-agbanwe mgbanwe Easy-Flex nke na-echebe ụmụaka pụọ ​​na mmerụ ahụ.
Aerụ mmanya - setịpụrụ LZSTL8WSS2K
Aerụrụma - ụdị vandal na-eguzogide
Mpụga mmanya dị n'èzí - nchịkọta ihe sitere n'okike